I-Nook, Clavering - I-Airbnb
Clavering, England, United Kingdom
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguRachel
Wamkelekile kwi-Nook, indawo yokuhlala enqabileyo yokuziphakela i-2. Encinci, kodwa yenziwe ngokugqibeleleyo, i-Nook inayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale ukhululekile eClavering, entliziyweni ye-North Essex yasemaphandleni. Iimayile ezi-5 ukuya kwimbali yeSaffron Walden kunye ne-Audley End, iDuxford kunye neCambridge kufutshane, ubekwe kakuhle ukuba uphonononge, ngelixa ukwazi ukukhaba umva kwaye uphumle kwindawo entle! Nceda uqaphele: isilingi ethambekileyo kwigumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela!
4.94 · Izimvo eziyi-162
INook, Clavering ibekwe kwindawo entle ukonwabela uluhlu lwezinto ezinomtsalane zalapha! Ngaphakathi komgama wokuhamba yindawo yokutyela yeCricketers (ikhaya langaphambili kunye nendawo yokusebenza yompheki uJamie Oliver) kunye ne-Ananta Thai emnandi, eqhutywa nguSergio nomfazi wakhe u-Ananta. Wamkelekile ngokufudumeleyo kuzo zombini. Sikwanayo ne-Ax kunye ne-Compass pub e-Arkesden, kunye ne-Cricketer Arms e-Rickling. Ukhangela ikheri? Siyayithanda iRhaduni, iikhilomitha ezi-2 ukusuka eNewport. Ipayinti egqwesileyo inokufumaneka kwiFox & Hounds pub entliziyweni yeClavering, umgama omfutshane wokunqumla amasimi.
Umgama oziikhilomitha ezintlanu ukuzisa kwidolophu yentengiso yembali yaseSaffron Walden, eneevenkile zokutyela, iikhefi, iindawo zokutyela kunye neepubs zesintu. Nceda ucele iingcebiso.
Unesiqingatha seyure ukusuka eCambridge, kunye nazo zonke izinto ezintle onokuthi uzenze kwaye uzibone apho, kwaye ukhwele iiyure zololiwe ukuya eLondon kuphela.
Indlu yaseAudley End kunye neegadi zikufuphi; Indawo ethandekayo ngenene xa ungekho emva kwemini, kunye neMyuziyam yaseDuxford Imperial War ikumizuzu eli-15 kude.
Kukho indawo yokuzivocavoca exhotyiswe kakuhle kumgama wokuhamba (iiseshini zoqeqesho lwabucala zinokucwangciswa) kunye namabala okudlala ajikeleze ikona. Ukuba unethamsanqa uya kubamba umdlalo weqakamba kwilali yeqakamba eluhlaza ehlotyeni. I-Clavering ineendlela ezininzi ezintle zokuhamba, kumasimi kunye neendawo zembali, ke thatha ithuba lokucothisa isantya kwaye ube ne-ramble! Buza ulwazi oluthe kratya.